Shiinaha kalluunka kalluumeysiga kalluunka petide iyo alaab-qeybiyeyaasha. Gelken
Sideetan iyo afar boqolkiiba macaamiisha ayaa muujiyay doorbid cad peptides kalluunka, iyo 51 boqolkiiba iyaga ka mid ahi waxay diyaar u ahaayeen inay qiimo sare ku bixiyaan alaabtan. Peptides kalluunka waxay leedahay rajo codsi wanaagsan oo ku saabsan habaynta cuntada. Waxaa loo isticmaali karaa inuu ahaado wakiilka isku dhuminta cuntada, emulsifier, wakiilka xumbada, wakiilka cadeeyakalluunka gelatin peptide leedahay barta barafku ka hooseeyo, si dhakhso leh ugu dhalaasho afka oo sii deyso dhadhan badan.
Baddu waxay ka kooban tahay ku dhowaad 80% bayosmiska dhulka, oo ay ku jiraan saliidda kalluunka, cusbada badda, caleenta badda, borotiinka kalluunka loo yaqaan 'collagen protein' iyo nafaqooyinka kale ee caafimaad, iyo kuwa cayriin ee shaqeynaya. Marka laga qiimeeyo jawaab celinta suuqa, 84% macaamiisha ayaa muujiyay doorbid cadpeptides kalluunka, oo 51% ka mid ahi ay diyaar u ahaayeen inay qiimo sare ku bixiyaan alaabtan. Jawaab celinta wanaagsan ee macaamiisha waxay muujineysaa fursad weyn oo suurtagal ah oo ku jirta suuqa-dhamaadka sare.
Waxaan ku taageereynaa macaamiisheenna tartanka quruxda badan ee nafaqada iyo kaabista cuntada iyadoo la soo saarayo tayo peptides kalluunka si looga caawiyo inay la kulmaan macaamiisha isbadalaysa iyo baahida suuqa.
Adiga oo ka faa'iideysanaya khibradeena adduunka hogaamineysa, qiimaha astaamaha ee aasaasiga ah iyo taageerada asxaabta, faanku wuxuu sii wadi karaa casriyeynta wax soo saarkooda isla markaana keenaya wax soosaarka warshadaha hogaaminaya suuq si deg deg ah ula kulmaya heerarka ugu sareeya deegaanka, anshaxa iyo tayada.
Cadeymo badan oo cilmiyaysan ayaa muujiyey in qaadashada maalinlaha ah ee peptides-ka collagen ay kicinayso kolajka iyo waxsoosaarka hyaluronic ee jirka, kaas oo ka caawiya hagaajinta maqaarka maqaarka, jilicsanaanta iyo haynta qoyaanka asalka ah, isla mar ahaantaana sii yaraanaya daloolada.
Iibinta cusub peptides kalluunka laga soo bilaabo duurjoogta la qabtay kalluunka badda oo kordhay 70% intii u dhaxeysay 2018 iyo 2019.
The "tayo sare leh" ee peptides kalluunka laga bilaabo kalluunka badda iyo raacdada nolol waarta oo caafimaad leh ayaa horseed u ah dalabka alaabtan.
Hore: Kalluunka kalluunka
Xiga: Collagen Hydrolyzed